Ultra yakachipa-inodhura nendege inotakura inotangwa neWestjet Canada
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Ultra yakachipa-inodhura nendege inotakura inotangwa neWestjet Canada
Airlines • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News
WestJet nhasi yazivisa chinangwa chayo kuvhura nyowani, inodhura-yakachipa-mutengo mutakuri (ULCC) mu Kanadha zvichitenderanwa nechibvumirano nevatyairi vezvikepe zvavo uye chero mvumo yekutonga inodiwa. Sevhisi inotarisirwa kutanga mukupera kwa2017 neyekutanga ngarava yegumi yepamusoro-density Boeing 10-737s yakagadzirirwa nendege iyo yakatanga kuunza yakaderera-mutengo kufamba kwemhepo ku Kanadha muna 1996. Iyo ULCC ichapa maCanada ma no-frills, sarudzo dzemutengo wakaderera.
"Isu takavaka WestJet kubva pamutengo wayo wakaderera, wedunhu kuenda kunhandare yendege yepasi rose ine mukurumbira kune nyika makumi maviri neshanu uye nhasi ndezvekuvhiringidza panoperera mutengo wemusika," akadaro. Clive Beddoe, co-muvambi weWestJet uye Sachigaro weBhodi revatungamiriri. "Kuvhura ULCC kuchawedzera mikana yekukura yeWestJet uye kuvhura zvikamu zvitsva zvemusika nekupa sarudzo kune avo vekuCanada vari kutsvaga mari shoma."
"Maonero epasi rese pamusoro pendege dzinodhura dzakachinja kubva pakatangwa WestJet muna 1996 uye tiri kupindura," akadaro Gregg Saretsky, WestJet Mutungamiri, uye CEO. "Kusunungura zvakakwana masevhisi nezvigadzirwa kuitira kudzikisa mutengo wevashanyi vanoshaya mutengo kwagadzira boka reULCC uye ndege yedu nyowani ichapa vanhu vekuCanada mukana wekukwikwidza, wakachipa uye unofara kubva kune imwe kambani ine mbiri rekodhi. ”
Yambiro nezve ruzivo rwemberi
Rumwe ruzivo rwakaburitswa mukuburitswa kwenhau iri "ruzivo rwemberi" mukati merevo yemitemo yekuchengetedza inoshanda. Ruzivo rwakadai rwemberi rwunosanganisira, asi harungogumira kune, ruzivo rwuremekedze: WestJet chinangwa chekutanga ULCC nyowani; iro-rekushandira zuva re ULCC; uye kukanganisa kweLCC, kusanganisira kuti iyo ULCC ichawedzera mikana yekukura kweWestJet, kuvhura zvikamu zvitsva zvemusika uye kupa pro-kukwikwidza, yakachipa uye inofara chiitiko chekubhururuka.
Ruzivo rwekutarisira-mberi rwuri mune iyi nhau kuburitswa rwakavakirwa pane zvimwe zvinhu zvezvinhu uye fungidziro, kusanganisira pasina muganho: Kufanotaura kwazvino kwaWestJet uye zano; mamiriro azvino uye anotarisirwa ekuda nharaunda uye zveupfumi nemaindasitiri mamiriro. kushandiswa kweWestJet's fleet uye contraction marongero maererano nazvo; zvinotarisirwa zvine chekuita nekuchengetedza ngarava; iyo yekumberi-curve yejet mafuta mitengo; uye inotarisirwa mwero wekutsinhana wedhora reCanada kuenda kudhora reUS.
Nemasikirwo ayo, ruzivo rwekutarisa kumberi rwuri pasi penjodzi dzakawanda uye kusava nechokwadi, mazhinji acho ari pamusoro pekutonga kweWestJet. WestJet inogona kudiwa kuti ichinje marongero ayo ebhizinesi azvino zvine chekuita neULCC uye / kana nguva uye maitiro ekuitwa kwayo uye panogona kunge pasina vimbiso yezvakaita kana shanduko yakadaro. Kupfuurirazve, kuvhurwa kweLCC hakugone kuve nemhedzisiro inotarisirwa neWestJet. Njodzi uye kusava nechokwadi izvo zvinogona kukanganisa WestJet uye kuvhurwa uye kubudirira kweULCC, zvinosanganisira asi hazvirevi kune: shanduko mune inodaidzwa nevaenzi; shanduko mumitengo yemafuta; kunonoka mukutakura kwendege; zviitiko zvakakosha zvekuchengetedza; shanduko mune zveupfumi nemabhizimusi mamiriro. shanduko mumakwikwi mamiriro; kupokana nekukwanisa kweWestJet kushandisa nekuchengetedza masisitimu ayo akaomarara; uye zvimwe zvinhu uye njodzi zvinotsanangurwa mumishumo yeWestJet yeruzhinji uye mafirita. Vaverengi vanokurudzirwa kuti vaone njodzi dzakatarwa muFomuJet yeruzivo rwegore uye hurukuro yevatungamiriri uye ongororo yegore rapera December 31, 2016, iyo imwe neimwe inowanikwa pasi peiyo WestJet's profile pa sedar.com, kune yakakosha yekuwedzera ruzivo.
Vaverengi vanoyambirwa kuti kuvimba zvisina kukodzera hakufanirwe kuiswa paruzivo rwemberi sezvo mhedzisiro inogona kusiyanisa zvine hunyanzvi kubva kune irwo ruzivo rwemberi rwunopihwa. WestJet haiti kuvandudza, kugadzirisa kana kudzokorora chero ruzivo rwemberi semhedzisiro yeruzivo rutsva, zviitiko zvenguva yemberi kana zvimwewo, kunze kwekunge zvichidikanwa nemutemo unoshanda.